Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy. Ny Baiboly prôtes
Apôkrifan ny Baiboly
Fidinan i Kristy any amin ny fiainan-tsi-hita
Jesoa ao amin ny kristianisma
ⓘ Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy. Ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy dia dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy ampiasain ny fiangonana ..
Ny Baiboly katôlika dia Baiboly kristiana ahitana boky kanônika miisa 73 ampiasain’ ny fiangonana katôlika, ka isan’ izany ireo boky atao hoe deoterôkanônika.
Atao hoe Apôkrifan ny Baiboly na Boky apôkrifa na Soratra apôkrifa na Apôkrifa fotsiny ireo boky nosoratana ho boky masina nefa tsy voaray ho ao amin ny lisitry ny boky ekena ho filamatry ny finoana ao amin ny Baiboly kristiana na amin ny Baiboly jiosy. Izany lisitra izany no atao hoe kanôna. Tsy mitovy ny fampiasan ny Katôlika sy ny Prôtestanta ny teny hoe apôkrifa. Samy manana ny lisitry ny boky ataony hoe apôkrifa ny fanontana Baiboly tsirairay.
Ny fidinan i Kristy any amin ny fiainan-tsi-hita na fidinan i Kristy any amin ny fonenan ny maty na fidinan i Kristy any ambanin ny tany dia lovantsofina momba ireo alina roa nitoeran i Jesoa Kristy tao am-pasana. Amin ny teny latina dia atao hoe Descensus Christi ad Inferos izany. Ao amin ny lahateny tamin ny andro Pentekôsta, araka ny Asan ny Apôstôly, dia nilaza ny apôstôly Petera fa tany amin ny Hadesy i Kristy. Ny lohahevitra momba ny "dian i Kristy mankany amin ny tontolo ambanin ny tany" dia nivoatra taty aoriana, tamin ny alalan ny angano kristiana sy ny zavakanto ary ny literatior ...
Ny fiainan-tsi-hita na fitoeran ny maty dia toerana misy ny olona na ny zava-manana aina hafa aorian ny fahafatesanan araka ny finoana sy ny fivavahana maro. Amin ny heviny mifintina dia toerana anasaziana mandrakizay ny olona voaozona ny fiainan-tsi-hita. Ny foto-pampianarana sy ny tenim-pinoana ao amin ireo fivavahana mônôteista momba ny fisian ny fiainan-tsy hita dia nateraky ny foto-kevitra mitaky ny fanamarinana ny fahamarinan Andriamanitra amin ny fitsarana, izay misy ifandraisany amin ny fahatsapan ny olona ny fisian ny asa sy toetra ratsy izay tsy ampy sazy nandritra ny fiainan iza ...
Ny boky prôtôkanônika dia ireo boky ao amin ny Testamenta Taloha izay hita koa ao amin ny Baiboly hebreo sady voaray ho boky kanônika nandritra ny fotoana niforonan ny fivavahana kristiana. Ao amin ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ôrtôdôksa dia mifameno amin ny boky deoterôkanônika, izay tsy kanônika fa apôkrifa ao amin ny Baiboly prôtestanta, ny boky prôtôkanônika. Miisa 39 ireo boky ireo ao amin ny Baiboly kristiana ampiasain ny ankamaroan ny fiangonana, ka ny 24 dia hita ao amin ny Tanakh.
Ny Testamenta Vaovao dia fizaràna faharoa amin ny Baiboly kristiana izay voasoratra taorian ny nahaterahan i Jesoa Kristy. Izy no mirakitra ny tantaram-piainana sy ny fampianarana nataon i Jesoa, araka ny finoan ny Kristiana, sy ny tantaran ny fiforonan ny fiangonana kristiana voalohany. Ny Testamenta Vaovao dia tsy anisan ny Baiboly hebreo. Voasoratra tamin ny taonjato voalohany taor. J.K. ny Testamenta Vaovao.
ⓘ Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy
Ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy dia dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy ampiasain ny fiangonana prôtestanta miteny malagasy amin ny fotoam-pivavahana. Ny edisiona tamin ny taona 1909 izay nasiam-panitsiana madinika tamin ny taona 1965 no ampiasaina amin izao. Io Baiboly io no ampiasain ireo Fiangonana prôtestanta toy ny Fiangonani Jesoa Krisy eto Madagasikara, ny Fiangonana Loterana Malagasy, ny Eklesia Episkopaly Malagasy sns. sy ireo Fiangonana evanjelika sy pentekôtista maro manerana an i Madagasikara. Mitondra ny anarana hoe Ny Baiboly ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy.
Ny tantaran ny Baiboly prôtestanta malagasy dia ampahany lehibe amin ny tantaran ny Baiboly eto Madagasikara.
1. Tantaran ny Baiboly prôtestanta malagasy
Ny Baiboly prôtestanta no azo lazaina hoe zokiny taminny dikan-tenin ny Baiboly amin ny fiteny malagasy. Tamin ny taona 1822 ny misionera dia efa afaka nanoratra ny fiteny malagasy merina tamin ny fampiasana ny abidy latina.
1.1. Tantaran ny Baiboly prôtestanta malagasy Fanombohan ny fandikan-teny
I David Jones tonga tao Antananarivo tamin ny 04 Oktobra 1820 sy i David Griffiths tonga tao Antananarivo tamin ny 15 Mey 1821, izay samy avy amin ny London Missionary Society LMS avy any Angletera no nanomboka nandika ny Baiboly tamin ny teny malagasy.
Nisy Malagasy nanampy azy ireo tamin ny fandikan-teny. Tamin ny 01 Janoary 1827 dia vita dika ny toko voalohany amin ny Filazantsaran i Lioka. Tamin ny taona 1830 no vita tanteraka ny Testamenta Vaovao ka 3 000 no natonta printy teo anelanelan ny taona 1829 sy 1830. Tamin ny taona 1835 dia vita dika manontolo ny Baiboly. Vitan i Baker sy Kitching fanontana printy ny Baiboly prôtestanta voalohany tamin ny 21 Jona 1835.
1.2. Tantaran ny Baiboly prôtestanta malagasy Fandrarana ny fananana Baiboly
Tamin ny taona 1831 dia voarara ny fananana Baiboly sy ny fivavahana kristiana sady noroahina hody ny misionera tamin ny andron ny mpanjakavavy Ranavalona I nanjaka teo anelanelan’ ny taona 1828 sy 1861. Novonoina ho faty na nampisotroina tangena izay tratra mitazona Baiboly.
1.3. Tantaran ny Baiboly prôtestanta malagasy Fiverenan ny fahalalahanny Baiboly
Tamin ny fitondran-dRadama II nanjaka tao anelanelan’ ny taona 1861 sy 1863 sy Rasoherina nanjaka teo anelanelan’ ny taona 1863 sy 1868 dia niverina nalalaka indray ny fivavahana kristiana sy ny famakiana Baiboly. Namoaka didy famerenana ny fahalalahan ny fivavahana kristiana tanteraka ny mpanjakavavy Ranavalona II nanjaka teo anelanelan ny taona 1883 sy 1896, izay nandimby an-dRasoherina, sady niova ho kristiana, ka nalalaka ny fananana sy ny famakiana ny Baiboly nasolony ny sampy izay nampandoroiny.
Ny Baiboly, izay nitombo isa hatrany, no boky voatonta printy voalohany amin ny fiteny malagasy ary nanjary lahatsoratra filamatra teo amin ny fampianarana haisoratra malagasy.
2.1. Ny fiangonana mampiasa Baiboly prôtestanta Ny Loterana sy ny Nohavaozina ary Anglikana
Mampiasa ny Baiboly prôtestanta ny fiangonana prôtestanta rehetra eto Madagasikara. Ny prôtestantisma dia tonga teto Madagasikara tamin ny vanim-potoana faha mpanjaka. Misy fiangonana maro ka ny roa voalohany tonga teto Madagasikara dia ny loteranisma sy ny kalvinisma na presbiterianisma izay nipoiran’ ny Fiangonana Loterana Malagasy FLM sy ny Fiangonan i Jesoa Kristy eto Madagasikara FJKM. Tsy ireo ihany no fiangonana prôtestanta fa ao koa ny Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara METM, ny Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky FMTA, ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara FPVM, ny Eklesia Episkopaly Malagasy Anglikana EEM. Ny mpivavaka maro ao amin ny FJKM, rehefa mamaky Baiboly ka tandrify amin ny soratra hoe Jesosy dia mamaky hoe "Jesoa".
2.2. Ny fiangonana mampiasa Baiboly prôtestanta Ny Adventista sy ny Evanjelika sns
Mampiasa ny Baiboly prôtestanta ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito, ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara, ny Fiangonana Pentekotista Mitambatra, ny Assemblée de Dieu Fiangonan Andriamanitra sy ny fiangonana pentekotista sy evanjelika na ara-Pilazantsara maro samihafa miparitaka eto Madagasikara, raha mbola tsy manana dikan-tenin ny Baiboly azy manokana. Ny Baiboly prôtestanta no nampiasain ny Vavolombelon i Jehovah eto Madagasikara talohan ny namoahany ny dikan-teniny manokana. Ny mpivavaka amin ny fiangonana sasany, rehefa mamaky Baiboly ka tandrify ny teny hoe Jesosy dia mamaky hoe "Jesoa".
3.1. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fandikan-teny voalohany
I David Jones no niandraikatra izany fandikan-teny izany. Niara-niasa taminy i David Griffiths, i Jeffreys, i James Cameron ary i J.J. Freeman. Nanampy koa ny mpianatra malagasy tamin izany fotoana izany. Tamin izany koa no nifanarahana tamin ny mpanjaka Radama I izay maty tamin ny taona 1828 momba ny toetoetran ny abidy hanoratana ny teny malagasy. Noraketina tamin ny taona 1823 fitsipi-pitenenana malagasy sy ny abidy izay nampiasa tarehin-tsoratra latina. Indraidray ny mpandila teny nanao ny asa teto Madagasikara, fa indraindray koa tany an-dafy, tany Maorisy. Vita tamin ny taona 1830 ny fandikan-teny ny Testamenta Vaovao, ka i Baker no niandraikitra ny fanaovana printy izany. Vita tamin ny taona 1835 ny fanontana printy ny Baiboly manontolo.
Tsy nadika avy amin ny Baiboly amin ny teny anglisy ny Baiboly malagasy fa avy amin ny Testamenta Taloha amin ny teny hebreo sy ny Testamenta Vaovao amin ny teny grika. Noho ny hamaroan ny mpandray anjara tamin ny fandikan-teny dia tsy nitovy ny fomban ny teny malagasy tao amin io Baiboly vita io ka nisy ny tena tsy nahafa-po.
3.2. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fandikan-teny faharoa
I Griffiths no niandraikitra izany tany Angletera. Nanampy azy i Freeman, avy eo i Meller. Tsy nisy ny Malagasy nandray anjara. Nivoaka tamin ny taona 1855 ny Testamenta Vaovao. Vita tamin ny taona 1865 ny Testamenta Taloha, nefa efa nisy ampahany tsy nandraisan i Griffiths anjara noho ny fahafatesany tamin ny taona 1863. Tsy azoazon ny olona izany Baiboly izany noho ny fomban ny teny malagasy nampiasaina tsy nahafa-po. Efa ny mpanjaka Ranavalona II, izay nanao ny fivavahana kristiana ho fivavaham-panjakana, no nanjaka tamin izay. Niezaka nampanaraka ny fitsipiteny malagasy ny mpanao fanitsiana ilay Baiboly. Nahitsy ny Testamenta Vaovao ka vita tamin ny taona 1869 izany sady navoaka tamin ny taona 1870.
3.3. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fandikan-teny fahatelo
Fanitsiana nandraisan ny misiona maro anjara ity indray mitoraka ity nanampy tamin izany ny misiona nôrveziana sy ny misiona anglikana ary ny misiona frenjy. Ny mpandray anjara lehibe tamin izany dia i Lars Dahle Nôrveziana sy i W. E. Cousins Britanika ary Andrianaivoravelona Malagasy, nefa tsy izy telo ireo ihany no nandray anjara fa nisy ampolony maro. Vita tamin ny taona 1887 ny fandikan-teny izay naharitra telo ambin ny folo taona. Ny fanoratana ny teny malagasy ao amin ity Baiboly ity no lasa filamatra ho an izay manoratra amin ny teny malagasy tamin izany fotoana izany, na taty aoriana aza.
Nisy ny fanitsiana natao tamin ny taona 1908 izay momba ny fanoratana ny teny malagasy. Fanitsiana maivana anefa no natao fa tsy tena niditra lalina ka mahatonga ny endriky ny teny malagasy ao amin ny Baiboly protestanta malagasy somary ntaolontaolo fiteny kokoa raha mitaha amin ny Baiboly katôlika aminny teny malagasy nivoaka tamin ny taona 1938. Io no atao hoe Baiboly Malagasy 1909.
3.4. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fanitsiana ny dikan-tenin ny Baiboly Malagasy 1909
Hatramin izao 2020 dia mbola tsy nilaza ho nanao dikan-teny vaovao ny Baiboliny ny Prôtestanta. Fanitsiana ny Baiboly Malagasy 1909 hatrany no misy. Tsy nekena ny fanavaozana natao tamin ny taona 2011.
3.5. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fanitsiana nivoaka tamin ny taona 1965
Ankoatry ny fanitsiana natao tamin ny taona 1908 dia nisy ny fanitsiana natao taty aoriana, navoaka tamin ny taona 1965 izay niandraiketan ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy. Izany Baiboly Malagasy edisiona 1965 izany no fantatry ny Prôtestanta malagasy maro nandritra ny faramparan ny taonjato faha-20 sy ny fiandohan ny taonjato faha-21.
3.6. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fanitsiana navoaka taminny taona 2013
Nisy ny fanitsiana maivana natao taty aoriana izay nitondrana fanitsiana ny fanoratana ny teny malagasy. Navoaka ny Bibles et Publications Chrétiennes any Valence tamin ny taona 2013 izany Baiboly izany ka nampitondraina ny anarana hoe Baiboly Malagasy 2013. Ity fanitsiana ity dia fanitsiana fahenina ny Baiboly vita tamin ny taona 1965.
Ireto misy ohatra amin ny fanitsiana natao: ny teny hoe hianareo dia nosoloana ny hoe ianareo, ny hoe odorana dia nosoloana ny hoe dorana, ny hoe aizina dia nosoloana ny hoe haizina. Izany fanitsiana izany dia manaja kokoa ny fitsipi-panoratana ny teny malagasy ankehitriny. Na dia izany aza dia voatazona ihany ny fomba fanoratra sy ny fandrafetana andian-teny tsy mifanaraka amin ny fitsipi-panoratana sy ny fitsipiteny malagasy ankehitriny. Ohatra amin izany ny fanoratana ny "y" faran-teny any anaty teny, ny tsy fametrahana ny mpanoritra "i" mialoha ny anaran-tsamirery mitana anjara asa lazaina na manomboka amin ny "I-".
3.7. Fandikana sy fanitsiana ny Baiboly prôtestanta malagasy Fanavaozana ny dikan-teny tamin ny taona 2011
Ity fanitsiana ity dia miavaka amin ireo natao teo aloha noho ny nanoloana ny teny hoe Jehovah amin ny hoe Tompo sy ny fanoloana ny teny sasany ary ny fanitsiana ny rafi-pehezanteny. Tsy io ihany no teny nosoloina fa ao koa ireo teny nohagasina izay efa manana hevitra hafa amin ny fiteny malagasy ankehitriny toy ny hoe kapôty sy ny rafi-pehezanteny tsy mifanaraka intsony amin ny fomba fitenenana ny teny malagasy ankehitriny. Misy koa ny fanavaozana ny dikan-teny hanitsiana fahadisoana hita ao amin ny Baiboly vita tamin ny taona 1965. Tsy ny teny malagasy ihany voahitsy fa ny fahadisoan-kevitra tamin ny nandikana ny Baiboly avy amin ny teny fototra hebreo sy grika.
Tsy nankasitrahan ny mpino prôtestanta maro izany Baiboly vaovao izany, indrindra noho io fanesorana ny anaran Andriamanitra io. Milaza anefa ireo manam-pahaizana momba ny Baiboly fa tsara ho an ny olona mpandalina Baiboly izany dikan-teny izany na dia tsy hovakina ampahibemaso aminny fotoam-pivavahana aza.
Inty misy ohatra fampitahana ny fomba fandikan-teny ao amin ny Baiboly vita dika tamin ny taona 1965 sy ny Baiboly vita dika tamin ny taona 2011:
4. Jereo koa
Soratanam-piraketanny Ranomasina Maty
Wikipedia: Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy